2020 / 10 / 28 uhleloBlog 5872 0
Unokufumana neepompo zekhitshi ezixhotyiswe ngezinto ezifanelekileyo njengabalawuli betephu kunye nezifudumezi zamanzi. Kodwa ezi zinto zale mihla azifumaneki kwisitayile ngasinye okanye ukugqitywa. Isikhenkcisi ekhitshini Umenzi bezizinikele ekwenzeni oompompo amashumi eminyaka, ngaphandle kweenkulungwane kunye nomgangatho ophezulu. Ungashenxisa indawo yomenzi nangona ivenkile ekufuphi yehardware inokukubonelela ngeepompo ezisemgangathweni.
Ngaphambili :: Iipompo zeKhitshi eMnyama next: Layita isitayile ngeeMpompo zeKhitshi eliMnyama
2022 / 01 / 20 871